Kaon AR: A B2B gbara ọkpụrụkpụ Adị Platform | Martech Zone
Kaon mmekọrịta bụ a onye na-eweta 3D mmekọrịta mmekọrịta yana ngwa ntinye aka na ahịa. A na-enweta ya na Kaon High Velocity Marketing Platform ??, Kaon AR?? bu ihe mbu ahia B2B nke na enyere ndi kompeni aka itinye otutu ihe nlere 3D dijital nke ihe aru ha na ndi ahia ha ?? ezigbo gburugburu ebe obibi.
On Tango-nyeere mobile ngwaọrụ, dị ka Lenovo Phab 2 Pro, ndị ọrụ nwere ike inyocha atụmatụ ngwaahịa, ndịiche dị iche iche, na ozi ahịa, ebe ha na-egosipụta arụmọrụ ngwaahịa na usoro dị iche iche dị na gburugburu ahịa. Nke a nwere ike inye aka nke ọma na ahịa dịpụrụ adịpụ, ebe ngosi ahia, ebe a na-eme nkenke, ndị na-enyocha nyocha, na-ewepụta ngwaahịa na ndị ọzọ.
Mmetụta nke ahịa na ahụmịhe ahịa na-abawanye nke ukwuu mgbe ndị ahịa nwere ike ịlele ngwaahịa ma ọ bụ ngwọta gị mebere na-apụta na mbara igwe ha (na ọnụ ọgụgụ) wee nwee ike ịkọwapụta uru nke ngwọta ahụ n'ihi na ha nwere onyonyo ahụ doro anya.
Ihe ikpo okwu a na-enye onyinye abụọ pụrụ iche bara uru maka ndị ahịa B2B:
Mepụta Njikọ Mmetụta - Ndị ahịa na-etolite nghọta miri emi banyere ngwaahịa ndị a ma nwee mmetụta nke mmetụta uche ka ha na-amụta etu ngwaahịa a si arụ ọrụ, ha nwere ike ịlele ozi ahịa agbakọtara ọnụ, wee nyochaa nhọrọ ngwaahịa, ọrụ, yana atụmatụ (dịka, wepu akụrụngwa).
Na-ekwurịta Valkpụrụ Dị Iche Iche - Hụ mmegharị esemokwu na-egosipụta arụmọrụ ma ọ bụ usoro ọrụ ngwaahịa ahụ, yabụ atụmanya nwere ike ịghọta uru ọnụ ahịa nke ọnọdụ ha na ọnọdụ azụmahịa ha.
Ndị ọrụ nwere ike ijide foto abụọ na vidiyo nke 10-nke abụọ nke Productdị Ngwaahịa 3D dijitalụ n'ime azụmaahịa azụmahịa dị ugbu a ma kesaa ha (site na email) na ndị ọzọ na-azụ ihe.
Banyere mmekọrịta mmekọrịta
Kaon mmekọrịta bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ B2B. Mmekọrịta mmekọrịta nke Kaon na ngwa ahịa na-eme ka ihe dị mgbagwoju anya na ngwa ahịa dị mfe dị mfe na ụzọ esi edozi ya n'ụzọ ọ bụla n'ụzọ ọ bụla, oge ọ bụla, na-atụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa. Companylọ ọrụ ahụ mmekọrịta 3D ahịa na ahịa ngwa na-agbanwe ngwaahịa na azịza ahịa ahịa dị n'ime ahụmịhe ọhụụ na-eme ka ndị ahịa nwee mmekọrịta miri emi, belata mmefu ahịa ma mee ka usoro ahịa ahụ dị ngwa. Ihe karịrị 5,000 Kaon Interactive ngwa na-eji zuru ụwa ọnụ na ahia na-egosi, ime ahịa demonstrations, ngwaahịa launches, Executive briefing emmepe, na weebụsaịtị site na-eduga zuru ụwa ọnụ ngwaahịa n'ichepụta.
Tags: arkwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwub2bnnukwu ọsọ ahịa ahịakaonkaon ARmmekọrịta